Fully Auto Bottom Seal Shopping Bag စက် Fully Auto Bottom Seal Shopping Bag စက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ပုံစံ - SLV-550SG
Side Gusset စျေးဝယ်အိတ်ပြုလုပ်သည့်စက်ဖြင့် အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အောက်ခြေတံဆိပ်
လုပ်အား တပ်ဆင်ထားသည်။-save on-ဝန်ယန္တရားနှင့် တင်းအားကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်သည့် အစားအသောက်ဇယား.
EPC ကိရိယာသည် ဖလင်ကို တည်ငြိမ်စေသည်။-အစားအသောက်အနေအထား.
မတ်တပ်ရပ်ပါ။-up sealing device သည် အောက်ခြေအလုံပိတ် မတ်တပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။-စျေးဝယ်အိတ်တက်.
အထူးတံဆိပ်ခတ်ကိရိယာသည် အလွန်ခိုင်မာသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ဖန်တီးသည်။.rotary seal ဓားဒီဇိုင်းသည် လွယ်ကူပြီး ဘေးကင်းသော ထိန်းသိမ်းမှုကို ပေးသည်။.
ထုတ်လုပ်မှု စီးဆင်းမှုကို ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း ထုတ်ပေးသည်။,အာကာသသိမ်းပိုက်မှုအပေါ် များစွာ သက်သာစေသည်။.
Control panel သည် ဂရပ်ဖစ်ဖြင့် ဖော်ပြသည်။,ဘာသာစကားပြဿနာများကိုကျော်လွှား.လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် ရှင်းလင်းပါသည်။.
မော်ဒယ် အိတ်အရွယ်အစားပြုလုပ်ခြင်း။(မီလီမီတာ) ဘေးထွက် Gusset မက်တယ်။.ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်(အိတ်/မိ) လေပေးဝေမှု လိုအပ်သည်။ ပါဝါလိုအပ်သည်။ စက်အရွယ်အစား
SLV-550SG 400~650 400~650 350~550 350~550 0.04~0.08 0.06~0.08 0~90 30~၅၀ 0.6~0.8Mpa 400L/မိ 8.0KW 7.၃x၂.0x2.2
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.carrybagmachine.com/my/fully-auto-bottom-seal-shopping-bag-machine-1.html
နှစ်ဖွဲ့တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုအသင်း၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သို့ရောက်လာပြီဖောက်သည်ရဲ့စိတ်ကူးကိုကူညီနိုင် Fully Auto Bottom Seal Shopping Bag စက်ငါတို့သည်ကွဲပြားခြားနားဈေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတွက်အပြောင်းအလဲရဲ့ဒေါက်ဖိနပ်အပေါ်နီးနီးကပ်ကပ်လိုက်နာသောသူနှစ်ဦးစလုံးဒေသခံနှင့်ရေခြားမြေခြားအခွက်တွေပါရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့မန်နေဂျာသူတို့ကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုနှင့်လိမ္မာန်ထမ်းလက်အောက်ရှိအလုပ်အကိုင်နှင့်နည်းပညာထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာရှိသည်။
အကောင်းဆုံး Fully Auto Bottom Seal Shopping Bag စက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Fully Auto Bottom Seal Shopping Bag စက် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ